Agaasimaha waaxda DPP oo amray in baaritaano lagu sameeyo dhismooyinka laga sameeyay agagaarka webiyada – The Voice of Northeastern Kenya
Agaasimaha waaxda DPP oo amray in baaritaano lagu sameeyo dhismooyinka laga sameeyay agagaarka webiyada
Star FM August 10, 2018
Agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda ee dalka Nuurdiin Xaaji ayaa waaxda dambi baarista ee DCI-da ku amray inay baaritaano ku sameyso dhismooyinka la sheegay in laga dhisay agagaarka webiyada.
Waxaa uu Nuurdiin doonaya in laga saal gaaro baaritaano ku aaddan ansaxinta howlahaasi si loola xisaabtamo cid waliba oo uu amarkaasi ka sii baxay.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo shalay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday in xabsiga loo taxaabayo sarkaal kasta oo ansaxiyay in guri ama xarun ganacsi laga dhiso goob aanan munaasab ahayn.
Waxaa dhawaan magaaladatani Nairobi lagu burburiyay goob ganacsi oo loo yaqaano South End kadib markii dowladu ay sheegtay in laga dhisay meel u dhow webi taasi oo hadii fatahaadyo ay jiraan xaaladda ka sii dhigi karto mid cakiran.
Bayaan uu galinkii dambe soo saaray agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda ee dalka Nuurdiin Xaaji ayuu ku sheegay in maamulada baaritaanada sameynaya laga doonayo inay 21 maalmood gudahood warbixin dhameystiran ku soo gudbiyaan.
Dowlada ayaa wacad ku martay inaan marnaba laga gaabin doonin in meesha laga saaro ama la burburiyo dhisme kasta oo laga dhiso goob aanan ku habboonayn
← Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka oo dhaliilay mooshin xilka looga qaadayo wasiiro
DHAGEYSO Horyaalka premier league oo manta furmaya →